लामो समय सम्म आँखाको द्रृष्ट्री शक्तीलाई कसरी बचाउने ? यी खानेकुराका साथै यस्ता क्रियाकलाप अपनाउनुहोस ... - Sudur Khabar
लामो समय सम्म आँखाको द्रृष्ट्री शक्तीलाई कसरी बचाउने ? यी खानेकुराका साथै यस्ता क्रियाकलाप अपनाउनुहोस …
admin December 15, 2017 स्वास्थ्य 0
Total Reader : 44
आँखा कमजोर भएका व्यक्तिहरुले नियमितरुपमा आफ्नो आँखाको जाँच गराउनुपर्छ । आँखाको प्रकाश ठिक छ र पढ्न-लेख्न कुनै कठिनाई भइरहेको छैन भने पनि वर्षमा कम्तिमा एक पटक आँखाको जाँच अवश्य गराउनुपर्छ ।
कतै तपाईलाई ग्यास्ट्रिक त छैन ? जानकारी लिनुहोस के हुन्छ ग्यास्ट्रिक हुन को लागि कस्ता छन लक्षण …
महिनावारीको बेला सम्भोग गर्दा गर्भ रहन्छ कि रहदैन ? जानी राख्नुस्
बिहानै खाली पेटमा दूध चिया पिउदा हुन सक्ने नोक्सान !